यही मनको टोड्कामा
आफ्नै तापमा हुर्किएको
मैँसँग थियो एउटा घाउ
एक्लो मातमा पुलपुलिँदै
दिनुसम्म दुःख दिन्थ्यो
घाउको यो एकल राजमा
तिमीले थपिदियौ अर्को घाउ
अहिले मेरो घाउ
साथ पाएर तिम्रो घाउको
खुसीमा लहलह छ
एक्लो घाउलाई पनि
जोडी चाहिने रहेछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, October 27, 2009 15 : Comments
महिनाको फोटो : रानी पोखरी, रानी र भुराहरू
रानी पोखरी, इतिहासको ऐनामा माझिएको अनुहार । र मायाको कलिलो आँधी !
एउटा ठिटौले दिनमा जब हिँड्दै थिएँ पोखरीलाई बायाँ बनाएर, एउटी युवती पोखरीछेउ उभिएर घोरिएको खुबै सुहाएको देखें मैले । ती नानीले माछालाई चारो छर्दै थिइन् पोखरीमा । बस्, मेरो क्यामेरालाई पनि चारो मिलिहाल्यो, मैले क्लिक् बजाएँ ।
त्यही फोटो मेरो ब्लगको नयाँ स्तम्भ 'महिनाको फोटो'को पहिलो प्रस्तुतिमा पस्किएको छु । अब हरेक नेपाली महिनाको पहिलो साता CaFe मा एउटा तस्बिर प्रस्तुत गर्दै जानेछु । फोटो पत्रकारिता आंशिक (पत्रकारिताको सिङ्गो पढाइअन्तर्गत नै केही मात्रामा पाठ्यक्रममा पढ्न पाएको) रूपमा पढेको उपयोगिता र फोटो खिच्ने आफ्नै रुचिबाट डोरिँदै यो स्तम्भ सुरु गरेको हुँ । सारा संसारको दर्शन गराउन नसके पनि देशको कुनै घटना, अवस्था र विशेषताको झलक दिन सकेँ भने मेरो यो प्रयासको फल त्यही हुनेछ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, October 24, 2009 10 : Comments
Labels: तस्बिर, महिनाको फोटो
देव कोटा !
अहिलेसम्म पनि नेपाली साहित्यका जरा र केन्द्र हुन् देवकोटा । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । उनै देवकोटा जन्मिएको आज एक सय वर्ष पुगेको छ त्यही अवसरमा उनको शतवार्षिकी विभिन्न कार्यक्रम गरी यस वर्ष देवकोटाको जन्मजयन्ती मनाइँदैछ । विक्रम सम्वत् १९६६ सालमा लक्ष्मीपूजाको दिन जन्मिने देवकोटाको युग बग्दै आएर २००० सालको ६० को दशकमा आइपुग्दा पनि नेपाली साहित्यको ताजको रुपमा जब्बर बन्दो छ । देवकोटाको यो आराधन नयाँ समयको साहित्यमा विकल्पहीनताको कारक हो कि विकल्प हुँदाहुँदै पनि पुरातनप्रेमी मानसिकता हो हाम्रो या हो कालजयी प्रेरणा र आदर्शको स्थापित मान्यता यो बहसको विषय हुन सक्छ ।
तर महाकवि देवकोटा खास अर्थमै देव कोटा बनेर नेपाली साहित्यको देवालयमा देउताको स्थापना लिएर चहकिएका छन् साँच्चै देव कोटा ! त्यति प्रतिभासम्पन्न सिर्जनाको अविरल धारा र सरस्वतीप्रेममा कटिबद्ध पुजारी अहिलेसम्म देखा परेनन् । अब कोही देवकोटा नै त बन्ने छैन त्यस्तै तेज लिएर कोही आएछ भने पनि देवकोटाको केन्द्रअघि त्यो अर्को केन्द्र बनेर रहला ।
यस्ता देवकोटाको शतवार्षिकी उत्सव र जन्मजयन्तीमा उनीप्रति हार्दिक शब्द-सुमन ! यो देवकोटाको जन्मको सय वर्षको अवधि मात्र होइन सिङ्गो नेपाली साहित्यको विवेचना र आकलनको घडी पनि हो । सय वर्षको गणनामा पर्ने अवधिअन्तर्गतमै देवकोटा २०१६ मा महाप्रस्थानमा अलप भए । तर त्यसपछिको गोरेटोको लेखाजोखा भने ऐतिहासिक आयामबाट हुनै बाँकी छ ।
देवकोटा जयन्तीको यो पावन अवसरसँगै जोडिएको लक्ष्मीपूजाको शुभ साइतमा सबैलाई तिहारको शुभ कामना ! शुभ दीपावली !!
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, October 17, 2009 8 : Comments
Labels: व्यक्तित्व, समय-सन्दर्भ, साहित्य डबली
भनिन् उनले - "यसो च्याउनुभयो"
नारीहरूको मनोभावलाई लिएर नारी पात्रकै मुखबाट पोख्‍नेगरी पुरुष लेखकहरूले धेरै साहित्य र लेखोट लेखेका छन् । नेपाली सङ्गीत फाँटमा हेर्दा त गायिकाहरूले गाएका नारीसुलभ कोमलता, लज्जा र विरहहरू घोलिएका प्राय: सबैजसो गीतहरू पुरुष लेखकले नै लेखेका छन् । यसको मूल कारण, नारी सर्जकहरूको सङ्ख्या कम भएकोलाई मान्ने गरिन्छ ।
बाहिरी संसारमा खुलेर झ्याङ्गिने र अपेक्षाकृत बढी सल्लाह-परामर्श गर्दै रचना संयोजन गर्नुपर्ने कला-सङ्गीतको क्षेत्रमा सहज रूपले घुलमिल गर्न नसक्दा नारी सर्जकहरूले नारी भावलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने रचनाको जिम्मा पनि अघोषित रूपमा पुरूष सर्जकहरूको पोल्टामा सुम्पिदिएका छन् । यसलाई पक्कै पनि उचित र सन्तुलित मान्न सकिँदैन । सके भने नारीहरूले पनि (नै) लेखे हुन्छ नि त नारी मनोभावका रचनाहरू भन्ने तर्क पनि अघि सार्न सकिएला ।
तर नारीहरूको अनुभूति, पीडा, उठ्नुपर्ने र नउठ्नुपर्ने मुद्दाहरू लगायत समग्र मनोभावहरू जति मात्रामा नारी सर्जकहरूबाट तिक्खर र प्रभावकारी रूपमा आउने सम्भावना हुन्छ, त्यति पुरुष लेखकबाट लेखिनेमा शङ्कै हुन्छ । पुरूष लेखकले स्वानुभूति गरेर त्यो नारीव्यथालाई लेख्‍नै हुँदैन भन्ने बन्देजको कुरा गरेको होइन मैले यहाँ । खालि, नारी समाजले भोगि-चाखिराखेको परिस्थितिबारे प्रभावशाली भावधारा सोझै नारीबाटै बढ्ता निख्खर रूपमा आउनेथ्यो कि भन्ने सम्भावनाको हेराइ हो । कारण, भीरमाहुरीलाई भीरको कुरा थाहा हुन्छ, लाठे छोरो गुमाएको आमैलाई नै गुमाउनुको पीर थाहा हुन्छ । भनेपछि, मूलबाटै भुलभुलाएको पानी शुद्ध र शीतल हुन्छ । तर नेपाली लेखनमा त्यसरी पीडितकै हातबाट कलम नसर्ने, प्रभावितले आफ्नो कोलाहल र प्रफुल्लता व्यक्त गर्न नसक्ने स्थिति कायमै छ, आगामी कैयन् समयसम्म यो जग भत्किने छाँट पनि देखिँदैन ।
मैले पनि त्यही रोगग्रस्त लेखाइको कापमा च्यापिएर यो कलम निचोरेर एउटा नारी मनोभावको गजल-रचना नारी-पात्रको मुखबाट बखानेको छु । कस्तो लाग्छ, सुहाउँदो कि भद्दा, पढेर पारख गर्नुहोला ।
न त जानुभयो न त आउनुभयो
दैलोबाटै फेरि यसो च्याउनुभयो ।
बोलाई बसाउन मैले भुलिगएँ,
त्यसैले पो हो कि घुर्की लाउनुभयो ।
बन्द झ्यालभित्र बेखबर म बनेँ,
इशारा त्यो गर्दा दु:ख पाउनुभयो ।
हुन्न भन्दाभन्दै पराई बाबु झन् झन्,
जहाँ पुग्छु त्यहाँ खुबै धाउनुभयो ।
बिदा गर्नै गाह्रो लोभी हजुरलाई,
घुम्टी खोल्दै आफैँ सरमाउनुभयो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, October 14, 2009 8 : Comments
"पर + यटन" = पर्यटन
दसैँमा फुर्सदिलो समयभन्दा पनि फुर्सदिलो मानसिकता बोकेर साथीहरू पूर्वी नेपाल छिचोल्दै दार्जिलिङ घुम्न गएको बखत आफ्नो मन भने ललचाएर विरक्तिरह्‌यो । घुम्ने टोलीमा सँगै जान नपाउनुको थकथकी त छँदै थियो, त्यो भन्दा बढी दिक्दारी आफू यतिन्जेलको जिन्दगीमा कतिसम्मको साँगुरो वृत्तमा सीमित रहेछु भन्ने तुच्छ सोचको कमिलाले चिलिरह्‌यो । कस्तोसँग जीवन त एकतमासको भइसकेछ, धेरै ठाउँ छन् जहाँ कामविशेषले नघचेटेसम्म गइएको त छैन नै, अझै धेरै कालसम्म जाने छाँट छैन । उही रुटीन र लिकमा फटफटाइरह्‌यो प्राणपखेरु ।
यसो हिसाब गरेँ, कहाँ-कहाँको सुवास मेरा यी जोर पयरले चाखेछन् हँ ? घुमघामको नाममा पूर्वको गृहथलो उदयपुर र राजधानी ओहोरदोहोर गर्दा यातायातको साधनले जति-जति ठाउँ टेकिभ्यायो त्यति रहेछ मेरो तीर्थाटनको आयाम ! त्यो पनि म घुमेको ठाउँ के भनूँ, याकमाथि चढेर शेर्पाले हिमाल चढ्ने तर्खर गरे जस्तै गाडीमा चढेर मैले गरेको सयर त सोझै याकको हिमालारोहणलाई बिर्साइदिने ढाँचाको सवारीको आफ्नै घुमफिर थियो । म त याकमाथि सवार भएर हिमाल चढेको बहादुरी बटुल्ने शेर्पा जस्तो बनेछु !
घुमफिरकै विषयमा कुराकानी हुँदा अड्डामा सँगै काम गर्ने एकजना दाइले बताए- "मसँग विदेशतिर सयर गर्न जाने त्यति धेरै पैसा हुने हो भने पूरै नेपाल घुम्थेँ ।" साथीहरू पूर्वी नेपाल घुमघाम गर्न गएको प्रसङ्ग मैले कोट्याउँदा ती दाइले सिङ्गो नेपाल नै घुमघामको मोहक गन्तव्य रहेको उक्त कुरा बताउँदै थिए । घुमघामको कुरो निस्किनासाथै हाम्रो मानसिकतामा टाढाको सयर भन्ने सोच घुसिहाल्छ । कुनै टोलमा भएकाहरूले आफ्नो टोल नाघेर अर्को टोलतिर टहलिने सोच, कुनै जिल्लामा रहेकाहरूले अर्कै जिल्ला घुम्ने सोच, एउटा विकास क्षेत्रमा रहेकाहरूले छुट्टै राज्य, प्रान्तमा पुग्ने सोच, अझ भनौँ, घुमघाम भन्नेबित्तिकै देशै काटेर परदेशतिर लम्किने हाम्रो सुर हुन्छ । पर्यटन भन्नासाथै पऽऽऽरै गएर फन्को मार्नुपर्ने घुम्ती लीलाको रूपमा बुझिएको छ । त्यही मर्म छामेर होला, संस्कृतबाट आएको 'पर्यटन' शब्दको अर्थ पनि शब्दकोशमा यसरी दिइएको छ- "दर्शनीय र महत्वपूर्ण स्थानहरू हेर्न वा मन बहलाउनका निम्ति देशविदेशमा गरिने भ्रमण वा यात्रा ।"
घुमघामको विषयमा कुरा हुँदा ती दाइले राजधानी काठमाडौँछेउमा पर्ने सुन्दरीजलपारिको चिसापानी भन्ने ठाउँको नाम लिए । एक दिनको घुमघाम गरेर आउन सकिने राजधानीछेउका लेले, लामाटार-लुभू (ललितपुर), नमोबुद्ध, जिरी जस्तै चिसापानी पनि मनोरम गन्तव्य रहेको कुरा दाइको बखानसँगै फुलेल मुद्राले साबित गर्दै थियो । हामी नेपालीहरूको घुमफिर गर्ने बानी छैन भन्ने थेगोले थिचिरहेको समयमा आन्तरिक पर्यटनको 'गफ'ले पछिल्लो समयमा केही हदसम्म काम गरेको देखिन्छ । मान्छेहरू व्यस्तताको बिटो थामथुम पारेर र घरमा डामडुम ताल्चा ठोकेरै भए पनि भुराभुरी चाइँचुइँ पार्दै देशकै पूर्व र पश्‍चिमतिर टहलिन निस्किन थालेका छन् ।
सहरिया युवा डिस्कोथेक र मुठीभरको पार्कमा सीमित भएर रमाइरहेको बेला कहाँ तिनलाई खबर होस् सुन्दरीजल र चिसापानीको ? फेरि नजिकको तीर्थ हेलाको नियति भोग्दै त्यस्ता घुमफिरका मनोरम गन्तव्यहरू रैथानेहरूको हेराइमा रूखोसुखो झाडीसमान बन्न पुगेको छ । बरू खोइ कुन पर्यटनको उद्देश्यले बत्तिएर हो, तिनै युवा जोडी च्याप्दै नगरकोट र गोदावरी भने धाउँछन् । ठाउँ दर्शन गर्ने लालसाले हो या आफैँ अरूहरूको सामु दर्शनीय मूर्ति बन्न !?
कतिपयलाई परिवारको नियमित खर्च धान्नै धौधौ हुन्छ, घुम्ने कुरा तिनका दैनिकीमा सपनीमा झुल्किने कार्यव्यस्तताभित्र मात्र पर्छन् । तर धेरैजना पैसो भएर पनि, रहर भएर पनि बरू ठूला योजना बुनेर बस्छन्, वरपर तीर्थाटनमा निस्किने 'कष्‍ट' उठाउँदैनन् ।
घुम्न आफ्नै देशभरिका ठाउँहरू पर्याप्‍त छन् । तर टाढा रहेका उस्तै ठाउँका लागि जति पनि खर्चिन तयार हुने हाम्रो मन हाम्रै छेउछाउ भएका ठाउँमा जान-बस्न लाग्ने खर्चको सूची सुन्दा भने थकथकी मान्दे निचोरिन्छ । यो त हातमा भएको मोतीलाई पनि धुलो ठान्ने मूल्यहीन भावना मात्रै हो । भित्रै कतै एउटा साथी छटपटाइरहेछ हाम्रो मनको किनारमा, हामी भने बाहिर व्याकुल भावले अरूको पछि कुदिरहेछौँ साथको तृष्‍णा बोकेर । छेउमै भएको कुराबारै जानकारी छैन । मैँ पनि त, आफ्नै जिल्लाभरिको कान्लाकान्ली फेरो मारेको छैन । ती दाइका कुराले झुलुक्क देवकोटाको 'के नेपाल सानो छ ?' निबन्धका हरफहरू ताजा भएर आए - "यहाँ वाग्नर कोदाली खनिरहेछन्; शेक्सपियर हलो जोत्ता हुन्; टिसियन र टर्नर भेंडा चराउँदा हुन्, सोक्रेटिज गुफामा घोत्लिरहेका होलान्, कालिदास आषाढको पन्ध्रमा धाराप्रवाह गीत गाइरहेका होलान्, मेरो वनमा हेलेन केलेरहरू गीत गाउँदछन्, यहाँ कति सावित्रीहरू छन्, जसका कथा संसारले सुनेकै छैन, यहाँ कति साहित्य छ, जो लेखिएकै छैन, न लेखिनेछ ।"
देवकोटाकालीन नेपालदेखि समय चिप्लिँदै अहिलेको नेपालसम्म आइपुग्दा कति धेरै शेक्सपियर र सोक्रेटिजहरू हलो जोत्दाजोत्दै, गुफामा घोत्लिँदा घोत्लिँदै खेर गए होलान्, हिसाब छैन । जसले एकरसमय जीवनबाट थोरै पनि फुर्सद निकालेर आफ्नै चौकुना आँगन पनि मजाले नियाल्न भ्याएनन् होला । अरूहरूबाट उपेक्षाको सिकार भएका उनीहरू आफ्नै जीवनको वेगमा पनि छेउकिनारमा फुर्सदी भावले आफू र आफ्नो बहलाउने रहरलाई स्वयम्‌बाट उपेक्षित गराइरहेछन् । तिनले कहिले टहलिएलान् आँगनबाट निस्किएर टोलतिर, जिल्लातिर, अञ्चलभरि, आफ्नै देशको कुनाकुना ???
हलो जोतिरहेछौँ … , गुफामा घोत्लिरहेछौँ …।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, October 12, 20096: Comments
Labels: प्रसङ्गवश, यात्रा
एउटा टीका झैँ -
उसरी त म खुलिनँ
खुल्दै खुलिनँ यो फ्रेममा ।
बेसोमती केशहरूमा छरिएको विरक्ति जस्तो
भयभीत आँखाका यी नानीहरू,
टिपिहाल्नु छ अकस्मात्-
टिलपिल कचौरा जस्तो गहिराइबाट
फेरि पनि देखेर:
आफ्नो तस्बिरको बलिदान
र क्यालेण्डरका पुराना कोठेपद मितिहरू सवार
खुइलिँदै गएको आकृति
मनाहीपूर्वक हेरिरहेछु ।
हिउँका धारिला हातहरूमा गएका
कोइलाका राता ल्याप्चेले
र जीवन नामको धमिलो रेखा
सबै छ, फ्रेममा ।
कुनै आरामको बिछ्‌यौनादेखि
टाढा उछिट्टिएको एकाबिहान
विरूप साइत बोकेर
युगसामु कलश समाउँछ
ओ यात्रा ! यात्राको उडान !!
बिग्रिएकै छ ।
सहाराको तप्‍त बालुवा जस्तोमा
रहरलाग्दो फुरफुर … !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, October 11, 2009 1 : Comments
बडादसैँको अवसरमा समस्त पाठकजन, ब्लगर मित्रहरु तथा
हार्दिक शुभ कामना !
Photo : www.nepalinfo.civiblog.org
बाहिर कौसीबाट देखिन्छ कावा खानमा मग्न छन् चङ्गाहरु छेउमै छ आकाशको निधारमा टीकाझैँ टाँसिएर बसेको खुर्पे चन्द्रमा । चङ्गाहरु चन्द्रमाको हाराहारीमा फरफराएर लहरिएको देखिन्छ ।
आफू छु अफिसमा 'अफिसे दसैं' मनाउनमा मग्न ! र चङ्गा र चन्द्रमाको लोभलाग्दो जुहारी अफिसकै कौसीको रोमान्चक देन हो त्यही चङ्गाको रङमा पोतिएर रसाएको छ मन ।
पातलिएको काठमाडौँ काठमाडौँ जस्तो छैन । सहरबासीहरु दसैँ मनाउन आफूलाई ओसार्दै गाउँतिर ओइरिएको फलस्वरुप सवारीसाधनको चाप सामसुम्म हुनेगरी घटेको छ । सडक एकाएक विस्तार भएझैँ भएको छ । सडक विभागले आफूले नगरेको कामको जस काठमाडौंको सडक फराकिलो भएर पाएझैँ भान हुन्छ ।
पहिलो पटक दसैंमा घरदेखि टाढा हुँदाको विरहमा गाँठो परेको छु । घरदेखि टाढा त छु नै यस्तो उल्लसित ठूलो पर्वमा र नितान्त आफन्तविहीन पनि छु यो चक्रपथको चक्करमा बेरिएको सहरमा । र बित्दो छ सप्तमी अष्टमी नवमी गर्दै यसपालीको दसैँ अफिसको कामकाजसँगै गुटमुटिएर । चाडबाड के हो घर के हो पारिवारिक जमघट के हो यही एक झमटको दसैँले म केटोलाई पाठ पढाउँदैछ । आह् ! यो पाठ पढ्न पनि कति पो सास्ती रहेछ !! आफूले त जसोतसो चित्त बुझाइयो, घरकाहरूले भने साह्रै न्यास्रो माने । त्यही न्यास्रोपन यता आफूसम्म फर्किएर नुन-चुक छर्यो मनभरि ।
देशका कुना-कन्दराबाट राजधानी भित्रिएर विभिन्न पेसा-व्यवसायमा बाँधिएका मानिसहरु सर्लक्कै जिल्लातिर हानिँदा काठमाडौँ सुनसान त बन्छ नै एक हिसाबले बन्द भैष हुँदो रहेछ । होटल-पसल बन्द छन् भाडावालको उपस्थितिले चाइँचुइँ गर्ने झ्याल-ढोकाका खापाहरु पनि एकतमास भइदिँदा भूतबङ्गलाको छनक मिल्छ टोलमा ।
अफिसमा तास खेल्नेहरु तास खेल्दैछन् कामलाई व्यवधान नपर्ने गरी । टेलिभिजन मिडियाको काम तासलगायतका मानोराजनात्मक कि्रयाकलाप अफिसमा नहोस् भनेर सूचना पाटीमा सचेतना टाँसो टाँसिएको छ । तर यत्रो पर्वमा अफिसियल आदेशलाई के टेरपुच्छर लगाउँथे कर्मचारीहरु ! यसो मौका हेरेर भुइँमै पनि पलँटी कसेर म्यारिज कलब्रेक जमाइहाल्छन् । नत्र चाडमा बिदा गुमाएर घर नगईनगई अफिसमा थुनिएर बस्नु पनि र मन बहलाउने केही उपाय पनि अपनाउन नपाउनु कस्तो उकुसमुकुस हुन्थ्यो ! आफ्नो ताल भने न तास, न पारिवारिक उल्लास ! पूर्णरुपेण अफिसे दसैं ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, September 26, 20095: Comments
Labels: पर्व-संस्कृति, समय-सन्दर्भ
जागिरे जोईको खोजी
आफ्नो जागिर होस्-नहोस्, एउटी जोई होस् र त्यो जोईको मुठा-मुठा पैसो तान्ने जागिर होस् । नारी अधिकारले समग्र बजार कब्जा जमाएको बेला पुरुष अधिकारको ज्वरोले तातिएका उमेरदार योग्य वरहरु यस्तै इच्छा प्रकट गरिरहेका भेटिन्छन् । आधुनिक कालबेला छ भनेर नाराकै रङरोगन घसी नाराकै पखेटा जडेर स्वतन्त्रता खोज्ने फाइफुट्टीरानीहरुलाई त यस पुरुष-अधिकारको नयाँ खोजीले खुत्रुक्कै पार्ला ! तर जागिरे रफ्तारमा चाल मारिरहेका हुनेवाली जोईहरुलाई भने यो खोजी अभियान जोडीको उम्मेदवारीमा पर्ने सुनौलो अवसर हुनेछ ।
बसको भीडमा, बेरोजगारको हूलमा, अड्डा-अफिसमा, चिया-चमेनामा जताततै कुनै उमेरदार नौजवानको बिहेको कुरा चल्यो कि त "टन्न गाँठ कमाउने केटी नपाएसम्म त आफू बूढोकुमार नै बसिन्छ यार" भन्ने थेगो सुनिन्छ । यस्तो रहर कोही हाकाहाकी पोखिरहेका छन् त कोही मनैमन कुरा खेलाएर रहरलाई पकाउँदैछन् । खुलेर नभन्नलाई जागिरे जोई पाऊँ भन्नु फेरि कुन त्यस्तो लाजमर्दो कुरो हो र ? मान्छेहरुले लाजै पचाएर कुन्नि के गर्न पाम् कता जान पाम् त भनिसके, जागिरे जोई पाम् भन्नु के अपराध भयो र !
आफू जागिरे पोइ पहिलेदेखि नै छ भने त जागिरे जोई पाएपछि हिसाब दोब्बर भएर पारिवारिक कारोबार सहज रुपमा बढ्ने नै भयो । आफू बेरोजगारै परिएछ भने पनि जागिरे जोईको प्रवेशसँगै घरमा लक्ष्मीको प्रवेश भइहाल्छ । तिनैको भरथेग र पोषणले दम्पतीको सास धानिहाल्छ । यही सुरक्षित र प्रभावकारी जीवनयापनको सामाजिक सोचले निकालेको नतीजा हो जागिरे जोईको खोजी ।
जागिरे जोई पाएपछि टोल-समाजमा जागिरे दुलहीको दुलहा भन्ने नयाँ आकर्षक परिचय मिल्ने कुरा त छँदैछ दुलहीको आत्मकेन्द्रित खर्चप्रथा पनि स्वाट्टै हटेर पारिवारिक बजेट अनुरुप ढल्दै जानेछ । आपुनो लाली टप र स्यान्डल किन्नमा मात्रै जागिरको कमाइ सक्दै आएकी कन्ने केटीले जोई भएर आएपछि त्यही पैसाले सारा घरखर्च मिलाउनुपर्दा दुलहीलाई झन् व्यवहारिक हुन सिकाउनेछ । बिहे भएर माइतीबाट बिदावारी भई घरमा आएपछि जागिरे जोईले मेरो आफ्नो खर्च मैँ आफैँलाई ठिक्क हुन्छु भन्दै महिनैपिच्छे थैलीलाई गोदरेज दराजमा कोच्यो भने त्यो पुरुष अधिकारको हनन मानिनेछ ।
जागिरे जोईको माग एक्काइसौँ शताब्दीकै माग हो । अरु देशले के-के कुराको खोजी र अन्वेषण गरिसके हामीले भने जागिरे जोईको खोजी गरेर थपक्क एक-एक जना सुकुमारलाई एक-एक जना जागिरे जोई जुराउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । लैङ्गिक समानताको मुद्दा चर्किरहेको बेला पुरुष नै जान्ने भएर जहाँ पनि अघि सर्दै जागिर खाने लहर पुरानो भइसक्यो । राम्रो र जागिरे पति पाउष भनेर मनैमन पुकारा गर्ने कन्ने केटीहरुले पनि वर्षौँ यो सजिलो काम गर्दै आए । दसैँबजारमा कुन गतिलो खसी भनेर छाने झैँ "को सरकारी सुब्बा, को अमेरिकाको ग्रीन कार्ड भएको, को घघडान व्यापारी, को इन्जिनियर" भन्दै युवतीहरुले योग्य वर छानीरोजी गर्दै आए । घुमिफिरी कुमार केटोले पनि मनको बह पोख्ने पालो नपाउनु त अन्याय नै हुन्छ । जागिरे जोई पाउने इच्छा यही आलोपालोको आवश्यक रीत हो । लौ है जागिरे जोई पाम् !
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, September 13, 2009 16 : Comments
यही त हो मुश्किल
तिमी धनी छ्यौ ।
र गर्मीमा सयौँ घामपानीले रेटेको
तिम्रो झ्याल नम्बर एकमा
छ ढकमक्क पर्दा,
र म चोरेर पनि एक पलक
पाउदिनँ हेर्न तिमीलाई ।
खोस्रिइँदै बग्ने देश,
अनेकौँ अत्तरको गुम्फन झैँ
कति-कति लडाइँहरू छन्
अँगारी तिम्रै केशसमान
गुच्छागुच्छा दौडटोलीहरू छन्
देखेर पनि नदेखिने झ्याल
तिमी झुल्किने आसमा बारम्बार
म पाले भइरहेँ ।
छुन्छ लाली रङ्गले
तिम्रो नौनी ओठ
कडा किलिपले करप्प कन्सिरी सम्हाल्छ,
उसरी त म
कहाँ चुम्बक भएँ र तिमीसँग ?
धुवाँदार मोटरले सडकमा
जसरी धावा बोल्छ
उसै गरी त तिमी के बोल्छ्यौ !
ओ महारानी हजुर,
हावा छेक्ने / घाम थुन्ने
त्यो महसुर पर्दा
झ्यालको खुला आँगनमा
कति डलरमा रोप्यौ ?
किन्छ्यौ गाढा मखमली पर्दा
सजाउँछ्यौ शीतल झ्यालभरि
तिमी धनी छ्यौ,
तिम्रा आँखामा नै
चिम्म ढकनीहरू छन् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, September 10, 20099: Comments
गजल लेख्‍नुमा सुरुमा मजा थियो, जुन बेला लेख्‍न सुरु गरियो । जब कविता लेखनतिर हात हालियो, तब त्यो मजाको वेग कविताले नै उठायो । मूल विधा पनि तबदेखि कविता नै बन्यो । अरुलाई पनि यस्तै हुन्छ कि क्या हो, ? मेरो सरसङ्गतिमा रहेका गजल र कविता दुवै लेख्नेहरूले भने मैले जस्तै तृप्‍तिको फरक तह अनुभव गरेको सुनाएको पाएको छु ।
र पनि गजल विधागत लेखनीको हिसाबले पहिलो प्रेमको रूपमा सम्हालिँदै-सुमसुम्याइँदै आइयो । र गेयात्मकतामा जुन सुरमय तरङ्ग दिन्छ गजलले, त्यो त कवितामा सम्भव छैन । अर्कोतिर मात्रा, मिटर र साँघुरो आयाममा खुम्चिनुपर्ने काफियासंसारको सीमा हुँदाहुँदै पनि भावगत र वैचारिक प्रखरता दिन गजल हच्किँदैन । यसैले गजलहरू आजसम्म पनि लेखिँदैछ- उता हिन्दी र उर्दू साहित्यमा; यता नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, नेपाल (नेवारी) आदि भाषाभाषीमा । फाट्टफुट्ट अङ्ग्रेजीमा पनि लेखिन थालेका छन् पछिल्लो समयमा गजल ।
तर गजलको जगले पक्की घरको स्वरूप गायनमा अभ्यस्त तुल्याएपछि नै लिनेछ । अचेल राजधानीमा हुने गजलका विविध कार्यक्रम, गजलकृति विमोचन आदिमा गजलकारहरू नै गुनासो र खिन्नता पोख्‍न थालेका छन् - 'गजल लेखेर भविष्‍य छैन । जथाभावी गजल लेख्नेहरूले गजलको मानमर्दन गरे ।' खास गरी, साहित्यिक ओजबिनाको लेखनी गजलतिर ल्याएर रचनात्मक पाइन देखाउने हूल देखेर र अपेक्षाकृत साङ्गीतिक गजलको जमजमाहट नदेखेर अत्यास मानेका भेटिन्छन् खास गजल-साधकहरू ।
कुनै पनि रचना स्वाभाविक रूपले सर्जकले आफ्नो आत्मानन्दलाई तौलिँदै लेख्‍छ, त्यसमा सामाजिक दायित्वको पनि पारख गर्दै जिम्मेवार मन-मगजले गुदी कुरो हाल्दै जान्छ । गजलमा पनि त्यस्तै हो । मायाप्रेम र भक्तिभावबाट लेख्न सुरु गरिएको नेपाली गजल-लेखन आज विविध विषयवस्तुमा फैलिएको पाइन्छ । बिस्तारै पङ्ख हाल्दैछ, समयको लगानी आवश्यक छ यसले एउटा रचनागत मूलबाटो बनाउन ।
त्यसअघि त यस्तै फुटकर लेखनमा अलिअलि मजा लिने न हो ! यसपाली यस्तै एउटा फुटकर मजा :
भो नगर्नू कुनै डाह अलिअलि बाँचेँ
बाँच्नै थियो आगो चुम्दै जलीजली बाँचेँ ।
यौटा आँखा अर्को आँखा कति प्यारा आँखा,
आफ्नै आँखा त्यतै नाच्दा गलीगली बाँचेँ ।
हिँड्दाहिँड्दै जिन्दगानी भयो कछुवा झैँ,
घडीसँगै सुस्तसुस्त चलीचली बाँचेँ ।
दुनियाँमा तगारोले जाने ठावैँ छैन,
थुनिएर श्‍वासको यो नलीनली बाँचेँ ।
वाण हान्ने प्यारा वैरी यतै सामु आऊ,
हान तारो आदतै भो छलीछली बाँचेँ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, September 08, 2009 10 : Comments
Labels: गजल, साहित्य डबली
- जन्मदिनको शुभ कामना बच्चा ! २५ वर्षे पट्ठोपन पूरा गरिस् ।
जन्मतिथिको अघिल्लो दिन नै ऊ बेलुकीपख बिछ्‌यौनामा घुस्रिँदै गर्दा आफैँसँग फुसफुसायो । 'आफैँलाई माया गर्नु' भन्ने जीवनसूत्र ऊ भर्खर त बुझ्न थाल्दैछ, यसैले शुभ कामनाको एक डाली आफैँतिर हुर्‍याएर छ्‌याप्प हान्यो । कस्तो रे भने, आफैँलाई माया गर्न नसक्ने-नजान्नेले अरूलाई पनि माया गर्न सक्दैन रे । यसरी ऊ पृथ्वी-पाठशालामा अभ्यासी चेला बनिदिएको छ । सिक्दैछ ऊ- मायासँगै घृणा, धोकाधडी, चाबुक, छिर्केखेल, लोलोपोतो, स्याहार, स्वानुभूति … ।
आफैँलाई शुभ कामना अर्पण गर्ने त्यो रातअघिका दिनहरूमध्ये कुनै एक दिन ऊ सडकमा थियो । सडक, जहाँ पहिलो पटक परेला खोतल्दै अस्तित्व जाग्छ, पहिलो पटक कलिला कुर्कुच्चामा टाप जड्न नपाई-नभ्याई छिप्पट यात्राको बिस्कुन सामुन्नेमा छरिइसक्छ । यस्तै सडकमा ऊ थियो ।
'यो सहरमा साह्रै एक्लो भइयो यार !',
खित्रिक्‌खित्रिक्‌ मोबाइलको बटन थिचेर कसैलाई पठाउन ठिक्क पारेको एसएमएम उसले त्यत्तिकै मेटिदियो । सोच्यो होला, यसरी विरह बाँड्न कोही लायकको मान्छे बचेको छ र संसारमा ?
फेरि के सोच्दै हो कुन्नि, टोलायो बतास खेलिरहेको सडकभरिको लम्बाइमा । सडक-सडक उसको रहर खितखिताउँदै वेग मार्छ । के ऊ सडकको बासमा तिहुनको सपना नै पकाईपकाई अघाउने सर्वहारा हो ? होइन । उसोभए सडकमा सवारी गडगडाएर हुइँक्याउने प्रतिष्‍ठित पुरुष हो ऊ ? यो पनि गलत । तर ऊ सडकमै छ । सडकैले प्राण धाने जस्तो । कस्तो भने, सडकैबाट उदाउँछ, सडकैमा अस्ताइदिन्छ । उदाउने र अस्ताउने चक्रमा मानौँ ऊ 'घाम-मानव' । त्यही सडकको फुटपाथमा पाइला गाड्दै मन सुलसुले भएर नाचेको महसुस गर्छ ।
'हा ! के भयो आज यो एक मुठी रगत उमाल्ने मुटुलाई ?' जाबो एक मुठी रगतको यस्तो सकसक ! उसले प्वाक्क आफ्नो छातीमा हिर्कायो । स्वाभिमान जाग्यो एक्कासि, अघि एसएमएसमा एक्लोपनको विज्ञापन गरेर आफूलाई झन्डै दयाको पात्र बन्ने कठघरामा उभ्याएको उसले । एउटा मोबाइल-मेसेज डिलिट गराइसँगै उसको पौरुष जोगियो धन्न !
ऊ आफूलाई बच्चै ठान्छ (अहिले त विधाताले उसका औँलाका चक्रहरूसम्म पनि कहाँ छिप्याउन बाँकी छाडे र !), ऊ आफ्नो सोचाइमा बच्चै रहिरहँदा उसलाई कमजोरको रूपमा कुल्चिन अरूहरू कति तयारी अवस्थामा हुँदा हुन् ! बच्चापनको सन्दर्भमा हिजै त हो, जलपानमा साथीहरूको दिवा जमघटमा एउटाले आफ्नैबारे प्वाक्क भनेको थियो - "मैले यतिखेर जीवनको २८ वर्षको उमेरमा जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ भने अब ३८ वर्ष हुँदा पनि सक्दिनँ ।" उसको आशय थियो- २७-२८ वर्षको उमेरसम्ममा एउटा युवाले आफ्नो परिपक्वताको सफल परीक्षा दिन सक्नुपर्छ सांसारिक लोकमा ।
उ: भर्खरै भत्किने छाँटको साइकल लरखराउँदै आँखामा फुलो परेको एउटा केटो यही सडकबाट गयो । यो सडकको विविधता यही हो । हातमा हजार रुपियाँको फूलको बन्डल सजाएर हाइ प्रोफाइलको प्रियतमलाई भेट्ने युवती पनि यही सडकबाट पार हुन्छे, एउटा छ यो केटो- निरुपाय आँखामा फुलो बोकेरै जीवनको उत्सव मनाइरहेछ । आह् ! फूल र फुलो परेको आँखा … । फूल बोकेर धाउन्जेल प्रेमीले त्यस युवतीलाई कति भाउ दिँदो हो, तर आँखामा फुलो रहुन्जेल त्यस केटाले भने सयौँ सुग्घरी आँखाको सामुन्ने कुरुपता र अशुभताको लाहाछाप किटिँदै दूर्‌दूर् को पात्र बनिरहला ।
जीवनमा कठिनताका पर्वतहरू कति छन् कति । सहजताका समथरता कति छन् कति । हिँड्दाहिँड्दैको एउटा गोरेटो कतिखेर लुटिन्छ, यो समय गोरेटोसम्मलाई पनि लुट्न बाँकी नराख्‍ने तन्नम लुटेरा रहेछ, उसले बुझेको छ । बुझेर के गर्नु, आफ्ना गोडाहरूको शुभ साइत वा अशुभ साइतले कुन बाटो रङ्ग्याउने हो, के पत्तो !? यही अड्कल काट्न मुश्किल !
अब ऊ यहीँनेर बच्चा रहँदैन । बच्चा रहे पनि ऊ बच्चैमा बूढो भएको छनक मिल्छ । उसलाई बूढो हुन हतार छ । वरिपरिका बूढो समाजको बीचमा ऊ कतिन्जेल पो बच्चो रहन सक्छ र !? यो बूढो समाजमा बच्चो भइरहने अनुमति छैन । चाहे कपाल नपाकोस्, चाहे ओठका कलिला जलपबाट दूध ननिख्रियोस्, चाहे बिहेको भारले पिठिउँ ठसठस कन्ने उकालीमा नजोतियोस्, बच्चा भइरहन पाइने यहाँ आँगन छैन । कुबेलामै बेलाको बोली बोल्नु सही बेला बनाउनुपरेको छ ।
अब ऊ बच्चा रहेन ।
व्यथाको पत्र भने
घाँटीघाँटी छ ।
यही घाँटीघाँटीको जीवन-उवाच कहिसक्न ऊ यो सडकमा माइक फुकिरहेछ - हेर, बाँच्नु भन्या बाँच्नु मात्र होइन रहेछ … ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, September 05, 2009 12 : Comments
हराउनु र आउनुहरू
केही गुमाउनु र केही पाउनुहरू
झट्टै हराउनु र फेरि आउनुहरू ।
अन्त्यानुप्रासमा सर्लक्क मिलेका हाम्रा यी- 'हरू' कर्म र कर्तुत ।
यी थुप्रै हरूमध्ये यतिबेला चाहिँ मलाई मेरै एकवचन कथाको पेटारो खोल्न हतार छ ।
हुन त कसैले सोधेको छैन, किन हराएको भनेर ? (नसोधिनु आफैँमा पनि यतिन्जेल मेरो बचाउको रक्षाकवच छँदै थियो) ;) तैपनि भन्न मन लागेको छ हराउनु र आउनुभित्रका यावत् कथा-व्यथा । अचम्म पनि लाग्दैछ, सोधाइबिना जवाफको बटुलो लिएर एकाएक आउने म संसारको प्रथम प्राणी त बनिनँ ? र पनि खोइ कुन अनुभूतिको पहाडमा उचालिएर हो, म आफ्नै आकाशमा प्रश्‍नको बादल-गुम्फन बनेँ, र आफ्नै आकाशमा यतिखेर उत्तरको बतास-ताजगी लिएर हलुका हुन खोज्दैछु । के त उसोभए प्रश्‍नोत्तरी खेलमै पूर्ण हुने रहेछ सृष्‍टिको लीला !? लीला अपरम्पार !
फुर्सदी मान्छे कुनै काममा अल्झिएपछि केही समय माकुरेजालमा फसेको माखोसमान हुँदो रहेछ । ठीक त्यस्तै नियति मेरो भयो पछिल्लो समय । फुर्सदको बेला जे-जे कुरामा मनमौजी समयको टिकट च्यात्दै बस्यो, व्यस्तताको काँडेतारमा उनिएपछि समयको त्यो च्यातिने टिकटलाई जोड्दै-जोड्दै लैजानुपर्ने हत्तेको अभ्यासमा रत्तिनुपर्ने रहेछ । एक समय थियो, व्यस्त कामकाजी दुनियाँबाट फुर्सदको दुनियाँमा 'फर्किनुपर्दा' म पागल झैँ बनेथेँ । यो 'पर्ने' कुरा आफ्नो हातमा नहुनु पनि ठूलो लीला हो ।
अँ त, म काममा फर्किएँ । एउटा नियमित रूटिन, नुनको सोझो बन्ने 'भान्सा', जिम्मेवारीमा बाँधिएको प्रहर … जे भन्नुस् । त्यसअघि एउटा मासिक म्यागेजिनमा काम गर्थेँ, (अहिले पनि गर्दैछु) तर पेटको दमाहा त्यसले नबज्ने, साथीभाइसँग बसिबियाँलो र आत्मीयताको सहयात्रामा त्यो एउटा मनखुसी काम थियो, निरन्तरता दिएँ । पत्रकारिताको नशा उतार्ने भूत सवार भएपछि कोठामा कैद भएर बसिरहूँ भने पनि त नहुने, मन नमान्ने । अलिअलि दैनिक र मासिक पत्रिकाहरूतिर बेलाबेला रचनात्मक बिस्कुन छर्थेँ, र बटुल्न पाएको थोरतिनो पारिश्रमिकले कुनै असम्भव युद्ध जिते झैँ उत्सव मनाउथेँ । पत्रपत्रिकामा पढेर मान्छेहरूले मलाई चिन्थे, तर अस्तित्वको लडाइँमा मैले सम्मानजनक रूपमा मैँलाई चिन्न सक्ने अवस्थामा तैनाथ गराउन बाँकी नै थियो । मानौँ, म त दौडिरहने तर कतै नपुगिने र डेग नचल्ने चिप्लेटी म्याराथन-सतहमा थिएँ ।
र अहिले म पाइला बग्ने त्यो गोरेटो पैल्याउने प्रथम मोडमा छु भन्ने सोच्दैछु । यति निजी कुरा यो ब्लगमा लेख्दा यस्तो लाग्दैछ, मेरो आदिम प्रेम, जोसँग म नसाको हाँगाहाँगासम्म गाँसिएको छु, उसैलाई सुनाउँदैछु मुटु टक्टक्याएर आफ्ना कुरा ।
जागिर खानु सबथोक होइन, जीवनको सम्पूर्णता होइन, तर नखानु जीवनको अपूर्णता त रहेछ । यति मैले भोगेको सत्य । कोही स्वरोजगार गर्छन्, उद्यमशीलताको अपूर्व नमूना बन्छन्, लघु व्यवसाय र घरेलु उद्योगबाट त्यस क्षेत्रमा सम्मानजनक परिचयसँगै अर्थलाभ गरेका छन् । मलाई भने बाजे-जीबाले नपैल्याएको नौलो काम गरेर नामको तृप्‍ति लुट्ने नशा र लोभ जाग्यो, र पसेँ अक्षरको खेतमा । पत्रकारिताको औपचारिक पढाइले कुत्कुत्यायो फेरि रहर र पेट दुवै हाँस्ने लेखनकै हरियालीतिर । यो हरियो फाँटमा मैले मेरो दुब्लो कायामा पनि अथाह भरिलोपन देखेँ, यसैले लोकसेवा पढ्ने पारिवारिक करकर एक कानले सुन्दै अर्कोले उडाएर आफ्नो पेसागत सोचबाट टसको मस भइनँ ।
केही समय भयो, तर युग भयो जस्तो लाग्दैछ ब्लगको दुनियाँबाट टाढिएको । जागिरे जीवनमा हेलिएसँगै मुहार पुस्टिए पनि मनमा भने चाउरीका पत्र खात लागिरह्‌यो ;) कतिखेर यो जागिरे उपद्रोबाट मौका मिलाएर ब्लगमा फैलिऊँ भन्ने सोचले आकुलव्याकुल बनाइरह्‌यो यस बीचमा । न आफ्नै ब्लग थपथाप गरेँ, न अरू साथीसङ्गीकै ब्लग जपजाप गरेँ । निमग्न म जागिरे हरिलट्ठक भएँ । पक्का तेल खाने मेसिन झैँ म जागिर खाने राष्‍ट्रिय जन्तु !
- समय छ्‌यालब्याल हुनु फुर्सदको जुम्राले तिरीमिरी खेलाउने महासङ्कट ।
- कामकाजी व्यस्ततामा च्यापिएर समय नहुनु बेफुर्दको जालोले गाँजेर मर्नु न गर्नुको उकुसमुकुस हालत ।
मुख्य कुरा हो- सन्तुलन मिलाउन सक्नु ।
फुर्सद र बेफुर्सदको बीचमै खेलिरहन सक्नु बच्ने उपाय हो ।
यही सूत्रमा रत्तिने प्रतिबद्धतापत्र हो मेरो यो हराउनु र आउनुको कथा ।
सुन्नेलाई सुनको माला …. ।
* तस्बिर: एब्सेन्स एन्ड प्रेजेन्स.इन्फो
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, September 03, 2009 14 : Comments
[सुरुमा अलिकता कथा, यस कविताको । संयोगसँग त जिन्दगीको खुड्किलोभरि हाम्रो जम्काभेट भइरहन्छ बेलाबेला । यस्तै संयोग हरेक कर्म, पेसा र अभियानको क्रममा कुनै न कुनै बेला हामी झेल्छौँ । संयोग: कुनै तीतो, कुनै मनोरम, कुनै मुटुछेड दर्दनाक । यो कविता लेख्‍न प्रेरणा जगाउन पनि यस्तै संयोगले काम गरेको छ ।
एक दिन ज्यानमा खाँदिएर बसेको थकानलाई बिसाउन रत्‍नपार्क शान्तिवाटिकास्थित पीपलबोटको चौतारीमा बसिरहेको थिएँ । छेउमै रानीपोखरी मौन कुलकुलमा थियो । प्रताप मल्लको परिवार उसैगरी हात्तीमाथि अथक रूपले सवार छँदै थिए । रत्‍नपार्कअघिको सडकमा सवारीसाधनको हल्लाखल्ला, हतारको पखेटा जडेर ठेलमठेल भीडमा बत्तिइरहेका मान्छेहरूको भुनभुन सबैदेखि छलिएर केही छिनलाई त्राण खोज्दै थिएँ । यत्तिकैमा आँखा पर्‍यो, छेउको फलामै बेन्चमा बसिरहेका एक जना बूढा बाजेतिर । एकसुरमा थिए उनी । उनको बसाइ, रसिलो अनुहार र झिमिकझिमिक परेलाको सुस्त तालले मलाई कस्तरी चिमोट्यो भने मैले त्यही पीपलको फेदमा बसेर कविता कोरेँ । अनि पछि त्यही कवितालाई थोरै पुछपाछ र कोरीबाटी गरेको रूप यहाँ पस्किँदैछु ।]
उमेरको पुच्छ्रे तख्तामा
आशीर्वाद ओइर्‍याउने हत्केलाभरि
भारी शिर बिसाएर
के सोच्दै होला साहू बूढो -
कति-कति गुमाइयो ।
इतिहासको व्यक्तिगत फित्ता,
हजुरबाको खिइएको औँला-सहारा
बाबुको सदाबहार गाली
र दाजुको उत्कृष्‍ट इर्ष्‍या
अझै घुम्छ दिमाग -
आमाले आँसुको भेटी चढाइरहने
त्यो सुकिलो पूजा-कोठा... ...
खियाले चपाइरहेको बेन्चमा
के हिसाब निकाल्दो हो साहू बूढो-
निद्रा साथी बन्दैन रातभर
सहरको तमासाको सर्कसभित्र
जोकर भइरहन्छ जिन्दगी,
सेफमा बिटा-बिटा चुल्याएको नोट
कहिले बन्ने हो आरामदायी घर ?
फुस्रै उजाडिएको मौन सडक
र घरमा धुम्धुम्ती
भूतबङ्गला भोगिरहेकी साहुनी बूढी
किन काटीकुटी लाग्छ ?
समयको अन्तिम अध्यायमा
र जिरो गन्दै
साहु बूढो अझै
त्यहीँ छ लोलाइरहेको,
कहिले छुट्ने हो समयको रेल ?
भीडमा लिकहरू एकदम बेपत्ता भइरहेछन् ।
निश्‍चल भइसकेको साहू बूढाको
कता-कता फुस्फुसाइरहेछ -
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, August 11, 2009 17 : Comments
केही बोलिसक्यो र पनि छुटफुट कुराहरू ओठकै डिलमा लरबराइरहे जस्तो ।
बिदाइमा आफन्तसँग मिलाएको हात वा न्यानो अङ्कमाल साथसाथै ज्यानमा लामो समयसम्म खिपिएर तापमान रहे जस्तो । पोल्ने । मानौँ, सूर्यलाई अर्घ्य दिन बाँकी रहेको एउटा काँचो बिहानी आँखामा उम्लिरहेको होस् ।
जमाना नयाँ भन्छन्, बदलियो भन्छन् । समय बदलिएको हो कि मान्छेको मन र दृष्टिकोण बदलिएको हो, अचेल कुरा गरौँ त शब्दले भन्न खोजेको भाव बोक्दैन, नबोलौँ त भीडसामु एकलकाँटे, अभिमानी र विचारहीनको बिल्ला लाग्ला भन्ने डर । यस्तोमा, नगरौँ त कसरी नगरी बस्ने र गरौँ त के-के मात्र गर्ने ?
विज्ञानको यो युग रे ! (हुनलाई त यो युग के-के मात्र हुन बाँकी रहेको होला र) यसैले त एकपछि अर्को आविष्कार भइरहे पनि हामी कुनै एउटा त्यस्तो आविष्कारलाई अझसम्म पनि पर्खिरहेछौँ । जसले गरोस् आजसम्मका सम्पूर्ण समस्याका समाधान । सम्याओस् सम्पूर्ण उबडखाबड । हरोस् सबैसबै बैचैनी, विरक्ति र विवशताहरू । आह् त्यो अचूक आविष्कार ! तर के त त्यो सम्भव छ ?
बाँचिरहेर पनि बाँच्न छुटे-छुटे जस्तो, मरिसकेर पनि कतै यतै केही बाँकी रहन्छु कि जस्तो पूर्वाभास । जीवन किन छ ? यो सृष्टिकै कुरा गरेको नि मैले । चाल नपाएर केही गर्नु पनि केही नगर्नु बराबर हो कि लाग्छ । होइन त ? मानौँ एउटा भूमरीको गीतमा हाम्रो जीवनले बेताले सङ्गीत भरिरहेछ । यस कुराको लागि बाँचिरहेको हामी भन्ने तथ्य कुरो आफ्नो तर्फबाट राख्न सकिन्छ, ल न त त्यो स्वतन्त्रता छ । तर त्यो त 'एउटा आफू'ले दिएको विचार र मान्यता भयो । एउटा आफू । त्यस्ता कति-कति आफूहरू छन् लोकमा । एउटा आफूले राखेको विचार अन्तिम र जड सत्य त कसरी भयो र ? कसैले पूरापूर कसैको प्रतिनिधित्व र ठेकेदारी गर्न सक्दैन ।
यसैले त जति चम्किए पनि, जति प्रस्ताव पास गरे पनि, जति बुँदे सहमति गरे पनि, जति चुम्बन गरे पनि, जति पारिश्रमिक पाए पनि, जति इनार खनाए पनि, जति बोतल ठाडो घाँटी लगाए पनि, जति आन्दोलन गरे पनि, जति भात पकाए पनि, जति घाम लागे पनि, जति ओथारोबाट चल्ला कोरलिए पनि, जति ट्राफिक जाम भए पनि, जति मालिकलाइ तेल घसे पनि, जति वन फँडानी गरे-नगरे पनि, जति, जति कुमारी जात्रा गरे पनि, जति फिल्म खेले पनि, जति मधुरात्रि मनाए पनि, जति खुच्चिङ भने पनि, जति फोटो खिचे पनि, जति ज्योतिष विद्यामा डुबे पनि, जति मुख धोए पनि, जति लेखे पनि, जति हुन्छ हजुर भने पनि, जति घरमा कड्किए पनि, जति तमसुक फट्टा गरे पनि, जति दमकलमा पानी भरे पनि, जति माया लाए पनि, जति तरकारी किने पनि, जति भकारीमा धान थुपारे पनि, जति धोका खाए पनि, जति बत्ती निभाए पनि, जति इमर्जेन्सी कक्ष सफा गरे पनि, जति पुष्‍टकारी खाए पनि, जति घडी हेरे पनि..... जति..... उफ् !!! उति नै फेरि फेरि गर्न बाँकी नै रहिरहने र केही न केही छुटिरहने कुरा अपूरा, कुरा अधुरा ।
* तस्बिर: बिजनेसओल.कम
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, August 07, 20099: Comments
दिक्क पनि लागेको छ, त्यसै।
त्यसलाई तर भोकले उछिनेको छ । दिक्क लाग्नुभन्दा भोक लाग्नु वेश । सोइपरी । चार जना नौजवानले बजाए हाफ-हाफ प्लेट भन्दै जम्मा आठ प्लेट चाउमिन । अक्षरको खेतमा लागिमेली गर्ने क्रममा भेटिएका सहयात्री मित्रहरू जनक, सुदीप, आरके सँगै म छु फुरुङ्गिएको । चार मध्ये जनकबाहेकका तीन भाइ हामी कहाँ जाने फुर्सदको काँटी जलाउन भनेर निकैबेर तिरिमिरी भइरह्यौँ ।
क्यामेरा छ ?- सुदीपले सोध्यो । झोला खँदिलै थियो । टाउको हल्लाएँ । घुमघाम बाहेक तस्बिर खिच्ने नै हाम्रो एकसूत्रीय सोच रह्यो । गाडी चढेदेखि नै बाटैबाट फुटपाथसम्मका तस्बिर खिच्न सुरु गरियो ।
तर यहाँ स्वयम्भू पुगेपछिको फेदीदेखिको तस्बिर मात्र राख्दैछु ।
* पर्यटक-पोज : कपडामा बुट्टा भर्ने कला-व्यवसायीसँग विदेशी पर्यटक झैँ बनेर तस्बिर खिचाउने मुद्रामा आरके ।
* एक-दुई-तीन : स्वयम्भू थुम्कोमा चढ्ने खुड्किलो ।
* धम्म शरणम् : रुखमुनि ध्यानमुद्रामा सुदीप । बाटोमा हिँडिरहेका विदेशी पर्यटकहरू समेत यो ध्यानमुद्रा र तस्बिर खिचाइ देखेर मख्ख पर्दै 'न्यू बाबा' भनेर मस्त मुस्काइरहेका थिए । अभिभावकको साथमा स्वयम्भू-दर्शनमा आएका टिनएजर केटीहरू पनि के कम !? कुकुरको पुच्छर देख्दा पनि हाँस्ने उमेरका भनिने उनीहरू हाम्रो 'ध्यानी लीला' देखेर खितखिताइरहेका थिए ।
ॐ शान्ती : रुखकै फेदमा मग्न रहेर तथास्तु-मुद्रामा ।
* जोखाना : रुद्राक्षको मालाको गेडा गन्दै । पछि एउटी दिदीले माला औँलाले कुन विधिले पक्रिने भनेर सिकाएपछि सुदीप झन् निर्धक्क तयार भएको थियो यो पोजका लागि ।
* बन्जी जम्प ? होइन : खुड्किलो चढ्ने क्रममा दायाँ-बायाँ बाटो छुट्याउनलाई राखिएको समात्ने बारमा लमतन्न परेर सुत्दै । छैन त कुनै आरोहण जस्तै ?
* भवतु सब्ब मङ्गलम् ! : सुदीपले ध्यानमग्न मुद्रामा तस्बिर खिचाएर वरिपरिका
बटुवाहरूको बीचमा रमाइलो छवि बनाएपछि त्यसैको सिको गर्दै आरके ।
* जहाँ छन् ... : बुद्धको पलेँटीछेउ हाम्रा फैलिएका जोर गोडा ।
* पहिलो झुल्को : सिँढी हुँदै माथि चढ्दाचढ्दै देखिने स्वयम्भूको झलक ।
* ....घुमाउने काठमाडौँ सहर : स्वयम्भू थुम्कोबाट राजधानी काठमाडौँ नियालिरहेका सर्वसाधारण । उचाइमा रहेको स्वयम्भू आउने दर्शनार्थीको अर्को लोभ उपत्यकाको एकसरो अवलोकन पनि हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय त दर्शन नभई घुमघामा र अवलोकनकै लागि डाँडा उक्लिन्छन् ।
* सुन जस्तै : स्वयम्भू मुहार दर्शनको आकर्षण ।
* अर्को कुनाबाट : स्वयम्भूको अर्को रङ ।
* भाग्यको स्वयम् परीक्षा : स्वयम्भू परिसरमै फेदीमा रहेको सानो कुण्डमा सिक्का पैसा खसाल्दै दर्शनार्थी । फ्याँकिएको सिक्क कुण्डबीचमा रहेको सतहमा अँडियो भने भाग्य बलियो भएको विश्वास गरिन्छ । यसरी एकचोटिमा १० रुपैयाँको सिक्का फ्याँकिने रहेछ ।
* मैँ सुन्दरी ! : बच्चा च्यापेकी सुन्दरीले हामीलाई निकै बेर हेरी । क्यामेरा खोसिने डरलाई खल्तीभित्र कोचेर तस्बिर भने लिइछाडियो ।
* मायाको बोझ : हाम्रो खुसुरमुसुर चाल पाएर बच्चाहरूलाई साथमा बोकी लाखापाखा लाग्दै अर्की सुन्दरी ।
* सुरदासहरू सुर न नूर : उक्लिँदा, फन्को मार्दा र ओर्लिँदा भोक र थकाइले कायल हाम्रो हालत ।
* देखे-देखे झैँ, भेटे-भेटे झैँ : स्वयम्भूसँग जुधाएका आँखा फेदी झरेपछि सहरको धूलोले पुछिँदै गर्दा थुम्कोको चहक अझ लोभलाग्दो देखिँदै थियो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, July 30, 2009 17 : Comments
रेडियो अन्तर्वार्तामा पाहुना भइआएका प्रतिभाशाली युवा पत्रकार गला सफा पार्दै थिए । उनी अखबारका पानामा बढ्ता अपेक्षा गरिने र पढिने लोभलाग्दा नाम मात्र होइनन्, नामी ब्लगर समेत हुन् एक समयका । (यस पोष्‍टको विषयगत संवेदनशीलताका कारण उनको नाम भने गोप्‍य राखिएको छ, कृपया माफी दिनुहोला पाठक-मित्रहरूले)।
अहिले पनि फाट्टफुट्ट ब्लग लेख्छन् । तर उनै नामी ब्लगरले ब्लगलाई हेर्ने आफ्नो चश्मा धमिलो र साँगुरो भएको प्रमाण रेडियो अन्तर्वार्तामा दिए । रेडियो प्रस्तोताको प्रश्‍न भुइँमा झर्नासाथै ती युवा ढुकढुकी प्रस्ट लबजमा जवाफ भर्थे । पत्रकारिता, साहित्य, फिचरलेखन, निबन्ध, कविता हुँदै अन्तर्वार्ताको विषय ब्लगसम्म आइपुगेको थियो । जम्दै थियो वार्ता । अन्तर्वार्ताकार रेडियोकर्मी यो एक बसाइ हाम्रो कुराकानी पूरा गर्न पर्याप्‍त हुँदैन भनिरहेका थिए । पाहुना बनेर आएका पत्रकार भने सोधेसम्मका कुरालाई सुस्तरी खुलाउँदै थिए । ब्लगबारे गफ सुरु भएपछि उनले कुराकानीकै क्रममा फ्याट्ट भनिदिए- "ब्लग रुष्‍ट साहित्यकारले आफ्नो सिर्जना पोख्‍ने ठाउँ भएको छ ।"
सुनेर चसक्क भो मन । उनको लेखनको त्यत्रो ठूलो प्रशंसक-भीडको एउटा सदस्य ठान्थेँ म आफूलाई । वाह, यस्तो पो पत्रकारिता ! यस्तो पो फिचर ! भनेर तारिफको खुला पुल बाँध्थेँ । उनै पुज्य लेखकले एक पङ्क्ति अन्तर्वार्ताको प्रहारले मर्‍याकमुरुक भाँचिदिए पाठकको मन । ब्लग रुष्‍ट साहित्यकारकै खेती हो त ? राती प्रसारित उक्त अन्तर्वार्ता सुनेर बिछ्यौनामा ढल्किएपछि पनि निकैबेर जाग्रामले दु:ख दिइरह्‌यो, आँखा झिमिक्क गर्न मानेनन् । निकै दिनसम्म त्यसको चस्का लागिरह्यो ।
उनको आरोपको सोझै आशय थियो - छापा माध्यममा सहज ठाउँ नपाएको अर्थात् नछापिदिएको झोँकमा साहित्यिकहरू ब्लगमा खनिएका छन्, तिनको बकम्फुसे भावनाका कुराले ब्लग भरिएका छन् । उनी कविताप्रति ठ्याम्मै रुचि नभएका अक्षरप्रेमी हुन्, त्यसै हुनाले अखबारको विशेष बार प्रकाशन हुने परिशिष्‍टाङ्कको संयोजक तथा फिचर सम्पादकका जिम्मेवारी सम्हालुन्जेल उनले आफू काम गर्ने अखबारमा कवितालाई छिरिक्क ठाउँ दिएनन् । उनले यी कुरा अन्तर्वार्ताकै क्रममा स्विकारेर खुलस्त भने । यस मानेमा भने प्रस्टवक्ताका रूपमा उनलाई मान्नुपर्छ ।
एक त आफू पनि ब्लग लेख्‍ने मान्छे परेँ, त्यसभन्दा अघि साहित्यिक लेखनमा राम्रैगरी हेलिएर 'केटाकेटी पारा'मा भए पनि हल्काफुल्का साधना गरेको मान्छे । मैले त्यो आरोप आफू र आफू जस्तै ब्लगरको भागमा तेर्सिएको अनुभव गरेँ । अनि तमाम ब्लगरको लस्करलाई पनि यो आरोपको सङ्गीनमा राखेर अड्कलेँ । सबै केही न केही रूपमा, मात्रामा साहित्य लेख्‍छन्, कवितै भनेर नलेखे पनि तिनका गद्यलेखनमा काव्यिकताको ओज भरपूर देखिन्छ । अहँ, तर रुष्‍ट साहित्यकार र ब्लगलेखनको साइनो कहाँनेर मेल खान्छ, त्यो आरोप ठ्याम्मै चित्तै बुझेन । रुष्‍ट साहित्यकार नै र मात्रै ब्लग लेख्‍छन्, ब्लग लेखनमा मोडिन्छन् त ? जो साहित्यिक छन् र ब्लग लेख्छन्, ति रुष्‍ट भएरै सबै कुरा छाडेर ब्लगमा हेलिएका हुन् ? आँखीभौँमा पोको परेका सोचाइका लालगेडीहरू फुकेनन्, बरू ती कसिँदै ब्लगिङका पाटाहरू खोतल्नतिर बत्तिन थाले ।
एक त हाम्रा साहित्यिक प्रकाशनहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि कति नै छन् र छाप्ने पर्याप्‍त विकल्प उपलब्ध छ भन्ने प्रश्‍न छ । अनि भएकाहरूले पनि कति मात्रामा पक्षपातरहित ढङ्गले लेखरचना छनोट गरेर योग्य प्रतिभा र विचारलाई स्थान दिन्छन् भन्ने अर्को मुख टाल्ने प्रश्‍न उभ्याउन सकिन्छ । अर्कोतिर, साहित्यिकहरूमै आत्मघाती रोग छ, प्रचारप्रसारको सस्तो मोहमा परिमाणात्मक रचनाको बाढी लगाएर हस्-हजुर ट्यास्स टक्र्याउँदै लेखरचना प्रकाशनको लागि सम्पादक र प्रकाशककहाँ बिन्तीभाउ बिसाउन पुग्नु । यस्तो गोटागोटी एकादुई 'प्रतिभाका मुहानहरू'को व्यवहारले आम साहित्यिकहरू र साहित्यिक क्षेत्र नाम त नाम तर बद्‌नामको रूपमा खातामा चढेको छ । सबै एउटै आँखाले हेरिने रूपमा पत्रु भएर दरिने स्थितिमा पुगेका छन् ।
आफ्नो क्षेत्र हो, यसमै गरिखाने हो भन्ने व्यावसायिक पाटो गाँसिएको भए साहित्यिक क्षेत्र पनि पक्कै स्वच्छ, शिष्‍ट र अनुशासित हुनेथ्यो होला, सोही रूपले सम्मान र इज्जत पनि यसले चुल्याउँदै लग्नेथ्यो । तर प्रदर्शनपूर्ण सोख र काँचो रहर पूरा गर्ने खुला क्षेत्र बनेपछि लाज न धक जसले जे गरे पनि कुनै हिसाब रहेन । राम्रोसँग साँवा अक्षर फुटाउन नसक्नेले वर्णमालाको किताब निकाले जस्तै हो, कुनै अर्थ र शैली नभई फतफत आवाज जथाभावी उछालिरहनु । भावना र विचार पोख्‍ने क्षेत्रमा छेकथुन हुनुपर्छ भन्ने कुरै होइन, तर यसमा हेलिनेहरू दुई कौडीको पनि सोच र समझ नहुनेहरू भएकाले सस्तोपनको हिमतह हाम्रो साहित्यिक पर्वतमा बढ्दैछ, जहाँ साँच्चिकै ठोस पर्वतको गरिमा भासिँदै गएको छ ।
अनि ल मानौँ, रुष्‍ट साहित्यकारहरू नै पैदा भएर देखिए अखबारी आँखामा भने पनि त्यसरी रुष्‍ट जमात पैदा गर्नमा अखबार, पत्रपत्रिका र प्रकाशनहरूको पनि कत्तिको हात छ भन्ने सवाल उठाउनु जायज छ कि छैन ? कसैप्रति रिसराग र पूर्वाग्रहको तीरकमान नउचाली भन्ने हो भने पनि चिनजानको र नातोगोताको छ भने एउटैको लेखरचना दसचोटि घुमाइघुमाइ छापिदिने निर्विवेकी सम्पादक र जाली प्रकाशकको कुनै कमी छैन नेपाली सञ्चार-प्रकाशनको क्षेत्रमा । धाईधपेडी गरेर एउटा नमस्कार टक्र्याएको भरमा कविता छापिन्छ, कहिल्यै भेटघाट गर्न नसक्ने स्थितिमा कुना-कन्दरामा साधनारत प्रतिभा हेरेको हेर्‍यै हुन्छ ।
यस्तोमा को ठूलो लेखक भन्नु, कसले जित्यो भन्नु !? प्रकाशनको इतिहास बनाउने कसरतमा त धाइधपेडीमा सस्तो शिष्‍टाचार भजाएर, यसो अरू टिपनटापन चखाएर असङ्ख्य छपाईकर्म आफ्नो रचनात्मक कर्ममा बटुल्नेले नै लोप्पा ख्वाइसकेको हुन्छ सबैलाई । जहाँ हेर्‍यो उसैको नाम, जता हेर्‍यो उसैको जात्रा ! यसरी रुष्‍ट साहित्यकारहरू छापा माध्यमबाट बढ्दैबढ्दै इन्टरनेट माध्यममा पनि नअँटाएर त्यसबाट पनि विष्‍फोट हुन खोजे भने के होला हँ कविता नरुचाउने पत्रकार महोदय ? तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा कविता नरुचाउने हक छ, तर रुष्‍ट साहित्यकार पैदा गराउने अधिकार पनि कसैले दिएको छेन है तपाईँहरूलाई । कुरा स्पस्ट छ- रुष्‍ट साहित्यकारहरू राम्रो भएर पनि भनसुन-चिनजानमा नबिकेर रन्थनिएर बसेका हुन्छन्, दुष्‍ट साहित्यकारहरू आफूमा केही नभएर पनि त्यही नहुनुको दूषित शून्यतालाई काखी च्यापेर साहित्यिक हाटबजारमा आफ्नो प्रदुषणको व्यापार बिगबिगी फैलाएर गरिरहेका हुन्छन् ।
भन्नुस् इर्ष्‍यालाग्दो लेखनशिल्प भएका युवा पत्रकार,
तपाईँ कसलाई रोज्नुहुन्छ ?
दुष्‍ट साहित्यकार ?
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, July 18, 2009 26 : Comments
Labels: ब्लगिङ, साहित्य डबली
स्वामी श्री रामदेव,
सेवामा प्रणाम !
विशेष लेखनीय कुरा धेरै भएर नैं अस्पतालको डाक्टरी मेचमा बसी स्टेथिस्कोपको त्यान्द्रो एकछिन खेलाउन छाडेर यसरी कलम समाएको छु । नत्र त हामी डाक्टरहरूको कलम खिटिरखिटिर औषधिको लम्बेतान प्रेस्क्रिप्सन सूची कोर्नमा कत्तिको चालू हुन्छ, भनिरहनु नपर्ला । यसर्थ: यस्तो महँगो कलमको इज्जत गरेर पूरा पत्र पढ्नु नै हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । यही आशामै टिकेको रहेछ संसार, हामी पनि रोगी-बिरामी नमर्लान् भन्ने आशैआशा सँगालेर तिनको शरीर चिरचार र खोतलखातल पार्छौँ । तर जति नै आशा सँगाले पनि पिताम्बर लपेटेर पेट यसो फुलफाल पार्ने र नाक साँक्कसुँक्क बजाउने एउटा लुरे दाह्रीवाल स्वामीको अघि बेकामी हुनुपर्ला भन्ने चाहिँ चिताइएको थिएन, त्यही भोग्नुपर्‍यो ।
हुन त, तपाईँ पनि यो शिविर र उः शिविर धाउँदै कपालभातिदेखि केके हो नानाभाँतीसम्मका योग सिकाउँदैमा बेफुर्सदी हुनुहन्छ होला । सबैलाई स्वस्थ बनाउन तपाईँको यात्रा अग्रसर भइरहेको छ । हामी डाक्टरलाई पनि त त्यो सबैको दायराभित्र राखेर स्वस्थ बनाउनुपर्छ नि तपाईँले । हाम्रो रोगको पनि ख्याल गरिदिनुस् भन्ने बिन्तीभाउ नै यस पत्रको मूल आशय हो । नत्र त हामी डाक्टरहरू कहीँका नरहने भयौँ !
हो स्वामीजी, रोग लागेर उपचारका लागि बिरामीहरू आउने क्रम घटेपछि हाम्रो बिचल्ली सुरु भएको छ । कोही अभिभावकले पनि अब आफ्ना सन्तानलाई डाक्टरसाक्टर बनाउने सपना नपाल्ने भए भन्ने त्राही भइसक्यो । तिनले छोराछोरीलाई 'बरु योगी बन्नू है बाबू-नानी' भन्ने सल्लाह दिएमा अचम्म मान्नुपर्दैन अब । मलाई पनि अचेल घरमा कोही पाहुनापासा आएको बखत छोरीलाई के बन्छ्यौ नानू भनेर सोध्दा उसले तोतेबोलीमा 'डाक्टल बन्थु' भनेर सुनाउँदा झनन्न रिस उठ्न थालेको छ । यो रिस साम्य पार्न तपाईँको योगशास्त्रमा के उपचारविधि छ स्वामीजी ? म जल्दोबल्दो डाक्टर मान्छे, बिरामी पो भएँ ।
मान्छेहरूले अचेल अस्पताललाई त पैसाका काल भनेर पो चिन्दा रहेछन् । त्यही नाममा उनीहरू आपसमा कुराकानी गर्दा रहेछन् । 'कति धाउनु होउ यो पैसाको काल' रे ! त्यो सुनेर मलाई त खोइ कस्तो कस्तो लाज हो कि डरले एकैचोटि पो घेर्‍यो । अस्पतालको गेटनेर एक जोडी बूढाबूढीको अस्पताल-विमर्श सुनेर तिनीहरूको दयालाग्दो अनुहारबाट बच्न म हुत्तिएर हतारहतार गेटभित्र आफ्नो ड्यूटीको वार्डभित्र छिरेँ र मात्र ढुक्क लाग्यो ।
हाम्रो पनि विवशता त्यस्तै छ नि, के गर्नु ! महँगो चिकित्साप्रविधिले उपचार खर्च मान्छेको मोलभन्दा अनमोल भइदिन्छ, हाम्रो के लाग्छ ? आफूले डाक्टरी पढ्दाको कष्ट सम्झियो, खर्च सम्झियो अनि त आफूले कालो चश्मा लगाएर बिरामीको दयालाग्दो अनुहार नदेखेजस्तो गरेरै भए पनि फी असुल्न मन लागिहाल्छ । बिरामीको नाडी छाम्यो, तिनको हातबाट सुनको घडी फुत्त झरिहाल्छ । त्यसलाई नटिपी हामीले धरै पाउँदैनौँ ।
स्वामीजी, हुन त तपाईँको रिस गरेजस्तो होला । तर तपाईँका कारण अचेल मान्छेहरू आफ्नो घरको चार दिवारभित्रै निजी अस्पताल खोलेर बसेजस्ता भएका छन् । त्यहीँ एउटै कोठामा पढ्ने पत्रिकादेखि प्राणायाम भस्त्रिकासम्मले पालो पाउँछ । उता तपाईँको योगासनले यता हामीलाई मरणासन्न तुल्याएको छ । अस्पताल आएका गोटागोटी बिरामी पनि योग गरेर अलि सन्चो भएको कुरा गर्छन् । मर्निङ वाकमा चउरतिर पुग्दा पनि के-के अनुलोम-विलोमको कुरा सुनिरहनुपर्छ ! यसले त हामीलाई कुलेलम ठोक्न बाध्य पार्छ कि जस्तो लागिसक्यो । तपाईँको योगले अरूहरूलाई जस्तोसुकै लाभ दिए पनि हाम्रो पेशाको पनि यसैले रक्षा गर्नेछ भन्ने भर परेका छौँ । दुनियाँको लाभ गर्दै हिँड्नेले हाम्रो लाभ पनि त सोचिदिनुपर्‍यो नि स्वामीजी ! पत्राचारको पर्खाइमा छु ।
- डाक्टर मुर्लीनाथन ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, July 14, 2009 12 : Comments